Ch 6 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 6 Luke
6:1 Ary nitranga fa, amin'ny faharoa Sabata voalohany, raha nandeha namaky ny vary an-tsaha, ny mpianany dia manasaraka ny salohim-bary, ary nihinana azy ireo, ny namafa azy ireo teny an-tanany.
6:2 Ary tamin'izany ny sasany Fariseo nanao taminy hoe:, "Nahoana ianareo no manao izay tsy mety hatao amin'ny Sabata?"
6:3 Ary mamaly azy, Hoy i Jesosy: "Moa tsy novakinareo ve izany, nataon'i Davida, raha noana izy, sy ireo izay niaraka taminy?
6:4 Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ka nandray ny mofo aseho, ary nihinana izany, ka nomeny ho an 'ireo izay niaraka taminy, na dia tsy mety ho an'ny olona ny mihinana azy, afa-tsy ny mpisorona ihany?"
6:5 Ary hoy Izy taminy:, "Fa ny Zanak'olona dia Tompo, Eny, ho an'ny Sabata. "
6:6 Ary nony fa, tamin'ny Sabata hafa, dia niditra tao amin'ny synagoga, ary nampianariny. Ary nisy lehilahy anankiray, ary ny maty tànana ankavanana tao.
6:7 Ary ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo nahita na hahasitrana amin'ny Sabata, ka amin 'izany mba hahitany izay hiampangana azy.
6:8 Na izany aza tena, Jesosy nahalala ny hevitr'ireo, ka hoy izy tamin'ilay lehilahy maty tànana, "Mitsangàna, ka mijoroa etsy afovoany." Dia niainga, dia nijanona.
6:9 Dia hoy i Jesoa taminy: "Mangataka anareo aho raha toa ka mety hatao amin'ny Sabata, ny manao soa, sa ny manao ratsy? Hanome fahasalamana ny fiainana, na handrava azy?"
6:10 Ary nijery manodidina amin'ny olona rehetra, dia hoy izy tamin-dralehilahy, "Mandrosoa ny tananao." Ary omena azy. Dia sitrana ny tànany.
6:11 Avy eo izy ireo dia feno fahaverezan-tsaina, ary dia niresaka tamin'ny iray hafa, inona, manokana, mba atao momba an'i Jesosy.
6:12 Ary nony fa, tamin'izany andro izany, dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary tao amin'ny vavaka 'Andriamanitra mandritra ny alina.
6:13 Ary nony efa tonga daylight, dia nantsoiny hanatona Azy ny mpianany. Ka dia nifidy roa ambin'ny folo lahy avy amin'ireo (izay nataony hoe koa Apôstôly):
6:14 Simon, izay atao hoe koa Petera, ary Andrea rahalahiny, Jakoba sy Jaona, Filipo sy Bartolomeo,
6:15 Matio sy Tomasy, Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota,
6:16 ary Joda ny James, ary Jodasy Iskariota, izay namadika.
6:17 Sy midina aminy, dia nijanona teo amin'ny ambaratonga toerana dia olona maro tamin'ny mpianany, ary copious vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema sy ny amoron-tsiraka, Ary Tyro sy Sidona,
6:18 ary tonga ka mba hihaino Azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahorin'ny fanahy maloto dia sitrana.
6:19 Ary ny vahoaka manontolo dia nitady hanendry Azy, satria nisy hery nivoaka avy taminy ka nahasitrana rehetra.
6:20 Ary nanopy ny masony tamin'ny mpianany, hoy izy:: "Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra.
6:21 Sambatra ianareo noana ankehitriny izay, fa ianao no ho afa-po. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny izay, fa dia hihomehezanao.
6:22 Hotahina ianao, raha olona no efa mankahala anareo, Ary rehefa ho efa nanavaka anareo sy nandatsa Anao, ary natsipy avy ny anaranao toy ny hoe ratsy, noho ny amin'ny Zanak'olona.
6:23 Mifalia amin'izany andro sy miravoravoa. Fa, indro, lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa izany zavatra izany ihany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany.
6:24 Na izany aza tena, Loza ho anareo izay mpanan-karena, fa ianao manana ny fampiononana.
6:25 Loza ho anareo izay afa-po, fa ianao dia ho noana. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny, fa ho ory sy hitomany.
6:26 Loza ho anareo, raha ny olona no efa nitahy anao. Fa izany zavatra izany ihany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka.
6:43 Fa tsy misy hazo tsara izay mamokatra voa ratsy, sady tsy ny hazo ratsy mamoa voa tsara.
6:44 Ho an'ny tsirairay ary ny hazo rehetra fantatra amin'ny voany. Fa tsy manangona aviavy amin'ny tsilo, na izy ireo no manangona ny voaloboka avy any amin'ny voaroy.
6:45 Ny tsara fanahy, avy ny fitehirizam-bokatra tsara ny fony, manolotra izay tsara. Ary ny ratsy fanahy, tsy ho azon'ny ratsy trano firaketana, manolotra ny ratsy. Fa avy amin'ny haben'ny ao am-po, no itenenan'ny vava.
6:46 Fa nahoana aho no antsoinao hoe, 'Tompo ô, Tompo,'Ary tsy manao izay lazaiko?
6:47 Na iza na iza manatona Ahy, ary mihaino ny teniko, ka mankatò azy: Dia hita ho anareo izay dia toy.
6:48 Izy dia tahaka ny olona nanorina trano, izay nihady lalina ary efa nametraka ny fototra teo amin'ny vatolampy. Avy eo, rehefa tonga ny tondra-drano, ny renirano dia nihazakazaka namely izany trano, ary izany dia tsy afaka mifindra izany. Satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy.
6:49 Fa na iza na iza mandre ka tsy manao: Izy dia tahaka ny olona manorina ny tranony teo amin'ny tany, tsy nanisy fanorenana. Ny renirano Nihazakazaka hamelezana azy, ary tsy ela dia niankohoka, ary loza ny naharavan'izany trano izany. "